Manampy an'i Cosmopolitan of Las Vegas ao amin'ny portfolio ny MGM Resorts
Home » Lahatsoratra farany farany » Hotels & Resorts » Manampy an'i Cosmopolitan of Las Vegas ao amin'ny portfolio ny MGM Resorts
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Entertainment • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • Resorts • fiantsenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny MGM Resorts International dia mahazo ny asan'ny The Cosmopolitan of Las Vegas amin'ny fandanjana vola $ 1.625 miliara, miankina amin'ny fanitsiana renivohitra miasa mahazatra.
Ny MGM Resorts International dia nanambara ny fifampiraharahana hahazoana ny asan'ny The Cosmopolitan of Las Vegas
Ny MGM Resorts International dia nanao fifanarahana marimaritra iraisana tamin'i Blackstone hahazoana ny asan'ny The Cosmopolitan of Las Vegas.
Aorian'ny fikatonan'ny fifanakalozana, ny MGM Resorts dia hanao fifanarahana fifanarahana fanofana mandritra ny 30 taona, miaraka amin'ireo safidy telo hanavaozana 10 taona.
Ny MGM Resorts International dia nanambara androany fa nanao fifanarahana marimaritra iraisana tamin'i Blackstone ny orinasa hahazoana ny asan'ny The Cosmopolitan of Las Vegas ho an'ny fandanjana vola $ 1.625 miliara, miankina amin'ny fanitsiana renivohitra miasa mahazatra.
Ny vidin'ny fividianana dia maneho EBITDA valo heny eo ho eo, miaraka amin'ireo synergie miasa ary andrasana amin'ny fitomboan'ny vola miditra.
Taorian'ny fikatonan'ny fifanakalozana, MGM Resorts hiditra amin'ny fifanarahana fampanofana 30 taona, miaraka amin'ny safidy fanavaozana 10 taona, miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Stonepeak Partners, Cherng Family Trust ary Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. ("BREIT"), izay hahazo ny trano fonenan'i The Cosmopolitan fananana. Ny MGM Resorts dia handoa hofan-trano $ 200 tapitrisa isan-taona voalohany, miakatra isan-taona amin'ny 2% mandritra ny 15 taona voalohany ary ny lehibe kokoa amin'ny 2% na ny fiakarana CPI (voafidy amin'ny 3%) aorian'izay.
“Faly izahay manampy Ny Cosmopolitan, trano fandraisam-bahiny mihaja sy trano filokana ao amin'ny Las Vegas Strip, mankany amin'ny portfolio-nay, ”hoy izy MGM Resorts CEO & filoha Bill Hornbuckle. “Ny marika Cosmopolitan dia ekena eran'izao tontolo izao amin'ny fananany mpanjifa tsy manam-paharoa sy ny vokatra avo lenta ary ny traikefa ananany, izay mahatonga azy io hifanaraka tsara amin'ny portfolio ary hampandroso ny vinanay ho orinasa fialamboly voalohany eo amin'ny sehatry ny lalao. Manantena ny fandraisana ireo vahinin'ny Cosmopolitan sy mpiasa ao amin'ny fianakaviana MGM Resorts izahay. ”
"Miaraka amin'ny renivola 500 tapitrisa dolara nanatsarana ny fananana hatramin'ny 2014, Ny Cosmopolitan manolotra tombontsoa tsy mampino hanitarana ny tobin'ny mpanjifantsika ary hanome safidy lalina kokoa ho an'ireo vahininay ao Las Vegas, "hoy ny CFO MGM Resorts Jonathan Halkyard. "Mino izahay fa afaka mampiasa ny fahaizan'ny MGM Resorts, sehatra fandidiana ary synergie azo tratrarina hafa hanohizany hanome serivisy tsara indrindra an-dakilasy, sady hitondra fitomboana ho an'ny trano."
Alohan'ny areti-mandringana COVID-19 tao anatin'ny 12 volana nifarana tamin'ny 29 Febroary 2020, ny Cosmopolitan dia nahatratra 959 tapitrisa dolara ny fidiram-bola ary $ 316 tapitrisa an'ny EBITDAR novaina. Tamin'ny telovolana faharoa nifarana tamin'ny 30 Jona 2021, 234 tapitrisa dolara ny vola azon'ny trano ary $ 92 tapitrisa an'ny EBITDAR novaina.